बिजुली | मझेरी डट कम
editor — Sun, 05/15/2016 - 04:14
बिजुलीदेवी घरबाट निस्किन् । घरको पछाडिरहेको पम्प चलाएर लोटामा पानी भरिन् । दाहिने हातले लोटा र बायाँ हातले घुम्टीको फेर समातेर सडकको किनारै किनारा उत्तरतिर लागिन् । झमक्क साँझ परिसकेकाले बाटोमा त्यति चहलपहल थिएन । यस भेकका स्थानीय नेताजीका छोरा सञ्जय गुप्तासँग बिजुलीदेवीको हिजो मात्र बिहे भएको हो । नेता बाबुको हर्ताकर्ता सञ्जय कुनै काम गर्न नजाने पनि अरूलाई काम अह्राउन र गराउनमा चाहिँ माहिर मानिन्छन् ।
अघिल्लो दिन राती दुलही बनेर बारातसँगै आफ्नो लोग्नेको घरमा आउँदा सडकमा बिजुली बलेको देखेर उनी चकित परेकी थिइन् । गाउँ बिजुलीको उज्यालोमा नुहाइरहेझैँ देखिन्थ्यो । उनलाई सुरुमा लागिरहेको थियो कि पोईको घर विहारमा रहेको माइती घरजस्तै होला, जहाँ बिजुली छैन र शुद्ध खानेपानी पनि छैन । गाउँबाट बिजुली बजारसम्म हिँडेर जान दुई घन्टा लाग्छ । बजारमा बिजुली र पानीका साथसाथै रेलको लिक पनि छ ।
दिनमा एकपटक मान्छे बोकेर छुकछुक गर्दै आउँछ । कहिलेकाहीँ मालवाहक पनि आउँछ । उनी दुई-तीनपटक रेल्वे स्टेसन गएकी थिइन् । त्यहाँको टिकटबाबुको लामो नाक र नाकमाथि चढेको गान्धी स्टाइलको पावरदार चस्माको सम्झना आइरहन्छ उनलाई । रेल्वे स्टेसनमा खाएको समोसा र गो लगप्पाको स्वाद अँझै जीव्रोमा झुन्डिएको छ । एकपटक बाबुसँग रेल चढेर पटना गएकी थिइन् । पिताजीले आफ्नो भेकमा अहिलेसम्म कुनै चुनाव हारेका छैनन् ।
गृह प्रवेशका बेला सासू-ससुराले उनको स्वागत गर्दै भनेका थिए,"मेरी बुहारीको नामजस्तै अनुहार पनि उज्यालो । आफू पनि आइन् र यस गाउँमा बिजुली पनि लिएर आइन् ।" सासू-ससुराले भनेका सांकेतिक कुरा नबुझे पनि सबै आगन्तुकले गरेको आफ्नो रूपको तारिफ उनले नबुझ्ने कुरै थिएन । ससुराजी हात जोड्दै सबैलाई सुनाइरहेका थिए,"विहारके बिजुली, विहारके बहु, हमनी सबके लिएल भागकी बात !"
बिजुलीदेवी अचम्मित भइन् । 'म देहातको एउटा गाउँकी छोरी न हुँ । धेरै पढेलेखेकी पनि छैन । न त विहारकी बेटी सोनाक्षी सिन्हाजस्ती राम्री नै छु, मलाई बहुको रूपमा भित्र्याएर मेरा ससुरा किन यतिबिघ्न खुसी भइरहेका छन् !' आफूलाई गरिएको भव्य स्वागत-सत्कारले भने उनको मन बागबाग भइरहेको थियो ।
"नेताजी, लौ बधाई छ । आखिर विहारसँग बहु-बेटीको रिस्ता जोड्ने तपाईंको चाहना पूरा भयो," एक अतिथि उनको ससुरासँग गला मिलाउँदै खुसी व्यक्त गरिरहेका थिए । "अब तपाईंको राजनीतिको घोडा सरपट दौडिन्छ," अर्का भद्र व्यक्तिले ससुराको पिठ्यूँमा धाप मार्दै भने ।
'मेरो विवाह र ससुराको राजनीतिबीच के सम्बन्ध छ ? विवाहको भोज खान आउने मान्छेहरू मेरो लोग्ने र मलाई बधाई दिनुको साटो किन ससुराले चुनावै जितेजस्तो व्यवहार देखाइरहेका छन् ? यो के चक्कर हो ?' उनी रनभुल्ल भइन् । दिल्लीमा उनी गएकी छैनन् तर त्यहाँ जाने नयाँ मान्छे र नयाँ ड्राइभर सडकका गोलचक्कर देखेर परेसान हुन्छन् रे भन्ने सुनेकी थिइन् । तर, यहाँ त मान्छेहरू शब्दैपिच्छे गोलचक्कर दिइरहेका छन् । दिल्लीका गो लचक्कर भ्रमपूर्ण छन् वा यहाँका मान्छे !
उनलाई हाँसो उठेको थियो, आफ्नो लोग्ने देखेर । चमकदार शेरवानी लुगामा पनि दुलहाको व्यक्तित्व खुल्न सकेको थिएन । त्यति धेरै हल्लनटाट पनि होइन तर उनको अनुहारमा विवाहको दिन देखिनुपर्ने स्वाभाविक चमक थिएन । बिजुलीदेवीको चमकका अगाडि उनी फिका भएका पनि हुन सक्थे ।
झट्ट हेर्दा विवाह समारोह दुलहा पक्षको नभएर दुलही पक्षले आयोजना गरेझैँ देखिन्थ्यो । दुलहाका मातापिता छोराको बिहे गराएकामा नभई बिजुलीलाई भित्र्याउन पाएकामा बढी खुसी देखिन्थे । गाउँलेको उत्सुकता र चासोको केन्द्रविन्दु पनि बिजुलीदेवी नै थिइन् । मानौँ, बिजुलीदेवी साक्षात् देवी हुन् । उनले सबैलाई वर दिनेछिन् । आमाबाबुको चाहना अनुसार सन्तान जन्माइदिनेछिन् । व्यापारीहरूको व्यापार बढाइदिनेछिन् । किसानको बाली सपारिदिने छिन् । जग्गावालाको जग्गा, साहूको ब्याज र पसलेका सामानको भाउ बढाइदिनेछिन् । गाउँका छोकरा-छोकरीलाई जागिर दिलाइदिनेछिन् । नेताको मान र कार्यकर्ताको सान पनि बिजुलीदेवीको आशीर्वादले नै बढ्नेछ । लाग्छ कि उनको विवाह त्यो रुन्चे अनुहार लगाएको लोग्नेसँग नभई यो गाउँसँग भएको हो । उनको गृह प्रवेशमा गाउँ जति उत्साहित छ, लोग्ने त्यति नै निरुत्साहित छन् ।
उनले सोचेकी थिइन् कि पोईको घरमा आएपछि माइती घरमा जस्तो पाइखानाको खोजीमा चौर, झाडी, खेत, कुलाको डिल, सडकको किनार र अर्काको बारी चहार्दै हिँड्नुपर्ने छैन । तर, साँझपख खाना खाइवरी आइमाईहरू लोटामा पानी भरेर खेतका गरा, बारी र सडकका किनारमा जान थालेको देखेपछि उनले बुझिन्, यहाँको चलन पनि यस्तै रहेछ ।
सडकको किनारै किनार सय मीटरजति हिँडिसक्दा पनि उनले खाली ठाउँ भेट्टाउन सकिनन् । सडकको किनारमा गाडिएका पोलमा बिजुलीका चिम बलिरहेका थिए । उनले आफू दुलही बनेर घरमा आउँदा ससुराले स्वागत गर्दै भनेको सम्झिन्,"मेरी बुहारीको नामजस्तै अनुहार पनि उज्यालो । आफू पनि आइन् र यस गाउँमा बिजुली पनि लिएर आइन् ।" अहिले यही बिजुली संकट बनेर उभिएको छ, उनका अगाडि ।
हुन त बिजुलीको उज्यालोलाई बेवास्ता गर्दै फाट्टफुट्ट केही महिला सडकको किनारमा शौच गर्न नबसेका होइनन् । तर, बिजुलीदेवी नवदुलही भएका कारण कसैको धक नमानी जहाँ पायो त्यहीँ धोती उचालेर टुसुक्क बस्न पनि भएन । उनी सडकको किनार छाडेर खेततिर लागिन् । गहुँ खेतमा भर्खर पानी पटाएकाले होला जमिनको सतह गिलो थियो । उनको दाहिने खुट्टा चप्पलसहित जमिनमा भासियो । बल्लतल्ल खुट्टा झिकिन् तर हिलैहिलो टाँसियो । वरिपरि कोही दबेको आवाजमा हाँसिरहेको थियो । को छ त्यहाँ ? जो भए पनि टट्टी गर्न लागेको मान्छेलाई हेर्ने कुरा भएन । सायद कोही पुरुष हिलोमा खुट्टा गाडेरै टट्टी गरिरहेको थियो । उनलाई त्यसो गर्ने साहस आएन । "कौन छे मेरे खेतमे पाइखाना करै ?" नजिकैको घरबाट कोही जोडले बोल्यो । सायद ऊ खेतको मालिक थियो । उसले टर्च बाल्यो । टर्चको प्रकाश गहुँँ खेतमा पर्‍यो । लोटा खेतमै छाडेर दुई जना कट्टु समात्दै उल्टो दिशातिर भागे ।
'तिनीहरूको ठाउँमा म भएको भए मर्नु बराबर हुन्थ्यो । भोलिपल्ट गाउँमा फलानाकी बुहारीले फलानाको गहुँ खेतमा टट्टी गरी भन्ने हल्ला फैलिन्थ्यो ।' बिजुलीदेवीलाई डर लाग्न थाल्यो । 'भउजी तपाईं जाँदै गर्नूस् म भाँडा माझेर आइहालेँ !' भनेकी थिइन् नन्दले । धन्न, उनी आइपुगिनन् । बिजुलीदे वीलाई शौच नै नगरी घर फर्कूंजस्तो लाग्यो । तर, पेटभित्रको आन्द्रा बटारिएर भुइँमा झर्ला जस्तो भइरहेको थियो ।
चिप्लो हिलो लागेकाले उनको खुट्टो बारम्बार चप्पलबाट फुत्किरहेको थियो । उनले दुवै चप्पल बायाँ हातले समाइन् । पाइखाना खोज्ने क्रममा दायाँ हातमा रहेको लोटाको पानी छचल्किएर आधा भइसकेको थियो । खेतका चाक्लाहरू पार गरेर उनी चौरमा पुगिन् । सरकारी पर्ती जमिन थियो वा कसैले बाँझै छाडेको जमिनमाथि ठुटो पारिएको एक घुच्चो पराल थियो । नजिकै गाई-गोरु बाँध्ने दुई कीला । परालको घुच्चोले आधा जीउ छेकिने गरी उनी हतपत भुइँमा लोटा राखेर घुँडा खुम्च्याएर बसिन् । सन्तोषको लामो सास तानिन् । उनले घुम्टोबाट अनुहार निकालेर बाहिर हेरिन् । ठिक अगाडि मटमै लो सडकको किनारामा बिजुलीको पोल थियो । पोल मात्र भएर केही फरक पर्दैनथ्यो तर जानी दुस्मन चिम धपक्क बलिरहेको थियो । आफू सबैका लागि सदृश्य भइरहेकाले उनी हैरान भइन् । उनलाई जहाँ शौच गर्ने जग्गा मिल्थ्यो, त्यहाँ बिजुलीको पोल खडा हुन्थ्यो । पोल नभएको ठाउँमा खाली जमिन हुँदैनथ्यो । उनी हेरिरहेकी थिइन् त्यस चिमलाई, जुन स्त्रीत्वमाथि व्यंग्यवाण चलाइरहेको थियो । उनी छटपटाउन थालिन् । शरीरभरि सकसक लाग्न थाल्यो । मानौँ, बिजुलीको किरण झुसिलकीरा बनेर रिङ्दै पैतालाबाट जीउको तल्लो भाग हुँदै माथिल्लो भाग र त्यसपछि सम्पूर्ण शरीरमा फैलिरहेको छ ।
बिजुलीदेवीको मन तर्कना गर्न थाल्यो । यसै त घरबाट तीन सय मीटरजति पर आइसकेकी छु । यसभन्दा टाढा कहाँ जाऊँ ? गाउँको बारेमा केही थाहा छैन । उनलाई यही विकल्प उचित लाग्यो । अघिदेखि निरन्तर पेट दुखिरहेको थियो । मांसपेशीहरू बाउँडिन थालेका थिए । उनको मनले चाहिरहेको थियो, शौच गरेर छिटो घर जाऊँ । लोग्ने कोठामा कुरिरहेको होला । न जाने के के सोचिरहेको होला । अफसोच ! लाख कोसिस गर्दा पनि शौचबाट निवृत्त हुन सकिरहेकी थिइनन् ।
बिजुलीको चिम जलिरहेसम्म, चारैतिर उज्यालो छरिरहेसम्म उनलाई पाइखाना लाग्नेवाला छैन । यो भर्खरै देखिएको समस्या थिएन । आफ्नो माइतीघर विहारको गाउँमा हुन्जेल उनले कहिल्यै शौचालयको मुख देख्न पाइन्न । एकचोटि बिरामी भएर सीतमढीमा जचाउन जाँदा अस्पतालको शौचालय देखेर बान्ता आउला जस्तो भयो र फरक्क फर्केर मैदानतिर कुदेकी थिइन् । पछि पटनामा जाँदा भने खाली मैदान नभेटिएकाले आफू बसेको होटलको शौचालय प्रयोग गर्न बाध्य भएकी थिइन् ।
गाउँमा त बिजुलीका खम्बाहरू पनि गाडिएका थिएनन् । कुनै गाउँमा बिजुलीका खम्बाहरू त हुन्थे तर तार हुँदैनथे । तार भए पनि लाइन हुँदैनथ्यो । तर, उनको गाउँ भाग्यमानी थियो, जहाँ उनका पिताजीले तेस्रोपटक चुनाव जितेपछि बल्ल बिजुलीको लाइन ल्याइदिएका थिए ।
बिजुलीको लाइन आयो, रातको अन्धकार गयो । अन्धकार मासिन थालेपछि गाउँलेको सातोपुत्लो उड्यो । माइती घरमा पहिलोपटक बिजुली आएका बेला पनि उनी यसै गरी सडकको किनारमा शौच गर्न बसेकी थिइन् । अकस्मात् उनको ठिक अगाडिरहेको बिजुलीको पोलमा चिम बलेको थियो । उनी विस्मित् हुँदै चिच्याउँदै उठेकी थिइन् । त्यस बेलाको सकस सम्झेर उनमा अहिले पनि उकुसमुकुस हुन्छ । उनको गाउँमा बिजुलीको लाइन आएको केही दिनमै एक-एक गरी सबै चिम फुटेका थिए । बिहे गरेर ससुराली आए पनि माइतीको दु:ख जस्ताको तस्तै !
ससुराले भनेको कुरा सम्झिन्, 'मेरी बुहारी आइन् रसँगै बिजुली पनि लिएर आइन् ।' सम्भवत: उनी सँगसँगै आएको हो, बिजुलीको लाइन पनि । तर, यो बिजुलीले सबैभन्दा धेरै दु:ख उनलाई नै दियो । उनको लाजलाई लिलाम गर्‍यो बिजुलीले । तनावग्रस्त बिजुलीदेवी अँझै पनि शौच गर्न सकिरहेकी थिइनन् ।
अचानक उनको दिमागमा एक 'विचार' फुर्‍यो । यसको व्यावहारिक अभ्यास उनले माइतीघरमै गरिसकेकी थिइन् । बिजुलीदेवी जुरुक्क उठिन्, पोलनजिकै गइन्, जमिनबाट ढुंगा टिपिन् र जोडले चिममा हानिन् । झर्‍याम्म !!
तिखो आवाजका साथ चिम फुट्यो । क्षणभरमै अँध्यारो व्याप्त भयो । बिजुलीदेवी मुसुमुसु हाँस्दै फेरि शौच गर्न बसिन् । पेट हल्का हुन थालेको थियो । उनको लाज लिलाम गर्ने बिजुलीको चिम झर्‍यामझुरुम भएर जमिनमा छरपस्ट थियो ।
अर्को बिजुलीको पोलको चिम पनि कसैले फुटाल्यो । आवाज र अन्धकार एकैसाथ आए । बिजुलीदेवीले आश्चर्यचकित भएर त्यो पोलतिर हेरिन्, जहाँ भर्खर कसैले चिम फुटालेको थियो ।
'झर्‍याम्म...! झर्‍याम्म...!! झर्‍याम्म...!!!'
सडकको किनारमा लहरै ठडिएका बिजुलीको पोलमा झलमल्ल बलिरहेका चिम एक एक गरी फुट्तै गए । केही बेरमै पूरै गाउँ अन्धकारमा डुब्यो । खित्...खित्...खित्...खित्...खित् !! अन्धकारको बीचमा गाउँलेको लामो हाँसो गुन्जियो । त्यसमा बिजुलीदेवीको उन्मुक्त हाँसो पनि मिसिएको थियो ।
धेरै वर्षपछि आज फेरि
माघ १९ 'जयन्ती'को संघारमा